भ्यालेनटाइन ‘डे’ र रातो सर्ट — News of The World
सरिश्मा बराल 'उमा', इज्रायलफागुन २, २०७४
कान्छी सारै सोझी छ । उनलार्इ भ्यालेनटाइन ‘डे’ भनेको के हो थाहसम्म थिएन । सानै उमेरमा सुगम ठाउँमा विवाह भए पनि न उसको कुनै प्रेमी थियो न उसको श्रीमानले कुनै डे भनी माया गरेको समझना नै छ ।
उति बेला, त्यसमा पनि त्यो कलिलो उमेरमा अहिलेको जस्तो डे अथवा वर्षगाँठहरु मनाउने प्रचलन भएको भए सायद कान्छीले वर्षमा एक दिन माया पाउँथिन होला । समयको गतिशिलता तथा घरायशी जीवनसँगै कान्छीको जीवनमा दुर्इ मुनाको आगमनले केही हदसम्म मल्हम लगाउने काम गरेको थियो ।
घरको तिब्र खस्कदै गएको आर्थिक अवस्था, ती दुर्इ मुनाको भविष्य, घरेलु हिंसा र श्रीमानका गैरजिम्मेवारपनले आजित कान्छी आफना मुनाहरुको उज्वल भविष्यका लागि शहर हानिन्छे । शहर पसे लगतै रेडियोमा वैदेशिक समाचारको विज्ञापन सुनेर वैदेशिक रोजगार लैजाने मेनपावर तथा शहरी जीवन बिताइरहेका शुशील व्यक्तिहरूसँग भेट हुन पुगी र वैदेशिक रोजगारमा होमिने सुर कसी उसले पनि ।
वैदेशिक रोजगारमा लैजाने मेनपावरका ढोका घच्घचाउँदा केही शहरीय जीवनसँग नजिक भएका साथीभाइसँग भेट हुन् पुग्छ र विदेश बसेर शहरमा घर हुनेले र पढ्न शहरमा बस्ने अधिकांश विद्यार्थीहरूले प्रणय दिवस अर्थात भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदा रहेछन कान्छीले पनि त्यहाँ आएसी थाहा पार्इ यस्तो दिन पनि हुँदो रहेछ अनि त्यहाँका साथीहरुसँग सोधी । यो कस्तो चाड हो ? अनि के गर्नी हो यो दिनमा ?
उसको मौसमी प्रश्न थियो र उसकी एक साथीले भनी, आफुलाई कसैले माया सहयोग गरेको मान्छे छ भने सम्झेर आज उपहार दिनु पर्छ अनि झन् माया सहयोग बढ्छ । उ गाउँकी सोझी मान्छे प्रेमीलार्इ नै दिने भन्ने बुझिन अनि गाउँ घरमा पनि घरका आँटी छाप्दा होस् या दुर्घटना हुँदा सहयोग गरेको सम्झेर शहर बसाइमा पनि केही सहयोगी आफ्नै गाउँ घरका जस्तै भेटेकी थिर्इ । तिनीहरूमध्येको एक एक असल व्यक्तिलार्इ सहयोगको भावना बढ्ने उद्धेश्य बोकी एउटा टिशर्ट – रातो गन्जी, नजिकैको पसलबाट किनेर बोकी कान्छी साथी भेट्न हिँडी ।
गाउँघरकै भए पनि पढाई लेखाई अनि शहरको जागिरे जीवन भएका, उनलाई भने प्रणय दिवसका बारेमा राम्रोसँग थाहा रहेछ । उनी त कतिबेला कान्छी अाउँछे र उसलार्इ सँगै लिएर कतै खाजा खाने ठाउँमा भेट्ने प्लान बनाइसकेका रहेछन् । आजसम्म जीवनमा कसैलाई केही उपहार कहिल्यै नदिएकि कान्छी लाजले भुतुक्क थिर्इ । भेट भयो सँगै गएकी साथीले उपाहार दिन आखाँको र्इशारा गरी तर उठ्नै सकिन दिनलार्इ ।
किनकि नत यो उसको सँस्कारमा थियो न त कोहीबाट परिवारमा यस्तो चाढबाढका बारेमा सुनेकी अथवा सिकेकी थिर्इ बिचरीले । साथीले नै मुख फोरेर गिफ्ट ल्याएको कुरा गरे’सी सहयोगी साथी पनि अप्ठ्यारो मानी मानि गिफ्ट लिन तयार भए । किनकि उनलाई थाहा रहेछ त्यो दिनको उपहार प्रेमी र प्रेमिकाबीच चल्ने चलन रहेछ । उहीहरूबीच अापसमा प्रेम थियो तर प्रेमी र प्रेमिका हाैं भनेर कहिल्यै भन्ने सकेका थिएनन् । अहिले पनि जब जब प्रणय दिवस झाँगिदै जान्छ आज भन्दा ११ बर्ष अगिको त्यो दिन र त्यो रातो टिशर्टले कान्छीलाई गिज्याइरहन्छ । कान्छीले र त्यो बेला उपहार दिने कान्छीले नबुझेको प्रणय दिवसको आगमनसँगै रातो टिशर्ट सम्झिरहन्छे ।
यो एक काल्पनिक कथा मात्र हो कहिँकतै कसैको जीवनसँग मेल खान गएमा संयोगमात्र हुने छ । कथाकार